မော်တော်ကား | RayHaber | raillynews
TÜBİTAK MAM ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) birlikte çalışarak hidrojen yakıtından güç alan yeni bir yerli otomobil geliştirdi ve2adet üretti. Geliştirilen araç hibrit bir motora sahip olup [ပို ... ]
အဆိုပါတွစ်တာအကောင့်မှတူရကီရဲ့ကား Initiative Group မှသစ်ကိုပြည်တွင်းမော်တော်ကားခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သက်. ခဲ့ပါတယ်။ မျှဝေမှုတွင်ကားတွင်အခြေခံအဆောက်အအုံများရှိပြီးအင်တာနက်မှတဆင့်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှုအသွင်ပြောင်းမှု 'အဆင့် ၃ နှင့်အထက်' အရတီထွင်နိုင်သည်။ [ပို ... ]
ပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ် TOGG ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောနည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကျောင်းကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်များတင်ပို့သည့်ပြည်ထောင်စုအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ Anatolian အထက်တန်းကျောင်းသည်ပြည်တွင်းကားကို Bursa တွင်ထုတ်လုပ်မည်ဟုကြေငြာပြီးနောက်အရေးယူခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Consumer Electronics Show - CES 2020 တွင် Fiat သည်ဆန်းသစ်ပြီးခေတ်မီသောလျှပ်စစ်သဘောတရား Fiat Concept Centoventi ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ Las Vegas တွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစားသုံးသူအီလက်ထရွန်နစ်ပြပွဲ CES 2020 [ပို ... ]
ပြည်တွင်းဖြစ်ကားများ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးစျေးဝယ်သည့်နေရာတွင်ကြော်ငြာအတုဖြင့်ရောင်းချပြီးဖြစ်သည်။ ရောင်းသူကကားအတွက်ယူရို ၃၀၀၀၀ (TL 30 ခန့်) လိုသည်။ ရောင်းသူကသူ၏ကားသည် ၁၂၀၀၀ ကီလိုမီတာလမ်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]